राष्ट्र बैंकमा जागीरका लागि एप्लाई कसरी गर्ने ? – Banking Khabar
बैंकिङ खबर । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले ११४जना कर्मचारी माग गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सहायक निर्देशक अधिकृत तृतीयमा २१ जना, सहायक निर्देशक अधिकृत तृतीय(चाटर्ड एकाउन्टेन्स) १०,सहायक निर्देशक अधिकृत तृतिय कानून २ पदमा आवेदन मागेको छ । यस्तै सहायक द्धितिय प्रशासन ६८ तथा सहायक द्धितिय प्राविधक पदमा १३ जनाको आवेदन माग गरेको छ ।
कसरी दिने आवेदन ?
इच्छुक तथा योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकले कात्तिक २९ देखि मंसिर २८ गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । आवेदन अनलाइन मार्फत दिनुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकले तोकेको अनलाइन फारममा भर्नुपर्ने सम्पूर्ण विवरण भरी सोको साथ आवश्यक कागजात स्क्यान गरी एट्याच गरेर तोकिएको दस्तुर तिरी आवेदन पेश गर्नुपर्नेछ ।
कसरी तिर्ने दस्तुर ?
दस्तुर आरबीबी मोबाइल बैंकिङ, फोन पे र ईसेवा मार्फत तिर्न सकिनेछ । यसबाहेक, राष्ट्र बैंकको बैंकिङ कार्यालय तथा जिल्लास्थित कार्यालयको नाफा नोक्सान आम्दानी फुटकर हिसाबमा जम्मा गर्न सकिनेछ । सहायक निर्देशक (विज्ञापन नं. २१।२०७५ देखि २३।२०७५ सम्म) खुला समूहको लागि आठ सय र प्रत्येक थप समावेशी समूहमा सहभागी हुन तीन सय रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । सहायक (विज्ञापन नं. २४।१०७५ देखि २६।२०७५ सम्म) खुला समूहका लागि छ सय र प्रत्येक थप समावेशी समूहमा सहभागी हुन दुई सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । कुनै एक समावेशीमा मात्रै एप्लाई गर्न थप दस्तुर तिर्नुपर्दैन ।
दरखास्त दिने पदका लागि तोकिएको न्युनतम शैक्षिक योग्यताको ट्रान्सक्रिप्ट
नेपालबाहेक अन्य मुलुकबाट हासिल गरेको शैक्षिक योग्यता भएमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट समकक्षता निर्धारण गरेको प्रमाणपत्र